PSJTV | सूचना राजमार्गमा जोडियो नेपाल
आइतबार, ०६ जेठ २०७५ पिएसजे न्युज
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान अब यही आर्थिक वर्षभित्र सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा जोडिने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव युवराज खतिवडाले परियोजनाको सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै यही आर्थिक वर्षभित्र नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरेसँगै नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा जोडिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस परियोजनाको ‘सिभिल वर्क’ तथा ‘टेस्टिङ’को काम पूरा भइसकेको छ, अब नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गर्न आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । ” यसअघि यी चार मुलुकबीच परियोजनाबारे कार्यगत र अवधारणागत सहमति भइसकेको तथा छिट्टै नै ‘अपरेसनल’ सहमति हुने जानकारी उपसचिव खतिवडाले दिनुभयो । यसअघि नै ती मुलुकहरूले ‘अपरेसनल’ सहमतिका लागि नेपाललाई बोलाए पनि निर्वाचनका कारण नेपाल सहभागी हुन सकेको थिएन ।
सूचना राजमार्ग सञ्चालनका लागि काभ्रे, सिन्धुली, महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी जिल्लाको तीस ठाउँमा सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीईसी) स्थापना गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्यसैगरी, भारत, बङ्गलादेश र भुटानले समेत विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीइसी) स्थापना गरिसकेका छन् । यी सामुदायिक सूचना केन्द्रबीच ‘लिङ्क’ भइसकेपछि यी मुलुकले विज्ञान, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू एक अर्काबीच ‘सेयर’ हुने र लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिमा वैद्यले हस्तान्तरणपछि यसको सञ्चालन, रेखदेख र मर्मत टेलिकमले गर्ने बताउनुभयो । यो सूचना राजमार्ग सञ्चालनसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसँग नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ थप फराकिलो हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
परियोजना निर्माणका लागि सन् २००७ मा दक्षिण एसियामा अवधारणा आएको थियो भने २००९ मा अवधारणाले कागजी रूप लिएको थियो । परियोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को करिब ८५ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको करिब २१ करोड रुपियाँ लगानी भएको उपसचिव खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजनामा परामर्शदाताका लागि टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेड
(आईसीटीसी) र निर्माणका लागि कोरियन कम्पनी आइसक्राप्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०६९ माघ १३ गते सम्झौता भएको थियो । काभ्रे, ढल्केबर र विराटनगरमा नेपालको सूचना राजमार्गको केन्द्र (हब) राखिएको बताउँदै खतिवडाले भन्नुभयो, “यस परियोजनाअन्तर्गत धुलिखेलबाट बीपी राजमार्ग हुँदै ढल्केबरसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबरसँग जोडिएको छ । ”
विराटनगरबाट भारतको सञ्चार निगमको अप्टिकल फाइबरमा जोडिएर सिलुगुडी र कलकत्ता हुँदै फाइबर भारतको चेन्नई पुग्नेछ । चेन्नईको केन्द्रबाट जोडिएर फाइबर विश्वको सूचना राजमार्गमा जोडिनेछ । सिलीगुडीका लागि एउटा कनेक्सन वीरगन्ज र एउटा विराटनगरबाट जानेछ । परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा धुलिखेल–नेपालथोक ५० किलोमिटर, नेपालथोक–सिन्धुलीमाढी ७० किलोमिटर र सिन्धुलीमाढी–ढल्केबर गरी जम्मा एक सय ७० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । बाँकी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबर मार्फत नेपाललाई यो सूचना राजमार्गमा जोडिएको गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो सूचना राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल टेलिकम, भारत सञ्चार निगम लिमिटेड, बङ्गलादेश टेलिकम कम्पनी र भुटान टेलिकमबीच सम्झौता भइसकेको छ । फोन, इन्टरनेट सेवालाई अझ सर्वसुलभ, स्तरीय र तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको यो सूचना राजमार्गको निर्माणपछि फोन र इन्टरनेटको शुल्कमा ३० प्रतिशतसम्म कमि आउने बताइएको छ । उपसचिव खतिवडाका अनुसार, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग परियोजना (सासेक) अन्तर्गत यी चार दक्षिण एसियाली मुलुक सो एकीकृत सूचना राजमार्गमा आबद्ध हुन लागेका हुन् । यो परियोजना ‘सासेक’ कै एउटा भागका रूपमा छ । दक्षिण एसियामा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको विकास गर्नु नै यो परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
आज पनि नेकपा बैठक: मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको माग
निर्मलाका हत्याराको खुल्नै लाग्यो नालीबेली, एक साताभित्रै सार्वजनिक गरिने
काठमाडौँ: सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? ...
काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नागरिकमा न्यायको पहुँच पुर्‍याउने कार्यमा सबै कानून व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को रजत महोत्वसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा उनले न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने ...
काठमाडौँ : केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब रु ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने भएको छ। नेपाली सहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना ...